Emetrol (အမ်မီထရောလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Emetrol (အမ်မီထရောလ်)
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Emetrol (အမ်မီထရောလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Emetrol®ကိုတခြားအသုံးပြုခြင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဆီမှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အညွှန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါ။ ထောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ ပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊ လျှော့သောက်ခြင်းမပြုပါနဲ့။
ဆေးဘူးထဲမှာပါတဲ့ ဆေးချိန်ခွက်နဲ့ ချိန်ပါ။ တခြားပစ္စည်းများနဲ့ ချိန်တွယ်ဖို့ မသုံးပါနဲ့။
အာနိသင်အကောင်းဆုံးရရှိဖို့ ဆေးမသောက်မီနဲ့ သောက်ပြီးပြီးချင်းမှာတခြားအရည်တွေ မသောက်ပါနဲ့။
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Emetrol®ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Emetrol®ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Emetrol®ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးနေချိန်။ ဆရာဝန်အညွှန်းမလိုဘဲ ဝယ်နိုင်သောဆေးများ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များမှာ ထုတ်လုပ်ထားသောဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်အားဆေးများစတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
Emetrol®တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
ဒီဆေးမှာ fructose သကြားဓါတ် ပါဝင်တာမို့ fructose ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသူများမသောက်ပါနဲ့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Emetrol®ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Emetrol®ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Nရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများ။ အရေပြားပေါ် အကွက်ဖြစ်ခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ ဖျားလျက် (သို့) မဖျားဘဲအရေပြားကွာခြင်း၊ ရင်ဘတ်နှင့်လည်ချောင်း ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရန် စကားပြောရန်ခက်ခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းစသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Emetrol (အမ်မီထရောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Emetrol®ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Emetrol (အမ်မီထရောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Emetrol®ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Emetrol (အမ်မီထရောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Emetrol®ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလောခံစားနေရတဲ့ ရောဂါများရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ဆီးချီုရောဂါဟာဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူကြီးများနှင့် အသက်၁၂နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများ
၁၅ (သို့) ၃၀မီလီလီတာ
၁၅မိနစ်တခါ (သို့) သက်သာသွားတဲ့အထိထပ်သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲတနာရီအတွင်း ၅ကြိမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။
ကလေးတွေအတွက် Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၅ (သို့) ၁၀မီလီလီတာ
Emetrol (အမ်မီထရောလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Emetrol®ဆေးကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။